ဒီလိုအပြောတွေကြောင့် မိန်းကလေး တွေ ဘဝပျက်သွားကြတာပဲ.....
ခု​ခေတ်​မှာ မြန်​မာမိန်းက​လေးအများစု ဘယ်​လိုဘဝပျက်​သွားသလဲဆိုတာ သိ​စေချင်​လို့ ဒီ post ကို တင်​ရတာပါ ။အစအဆုံးဖတ်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်ပါနှမချင်းကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင်ပေါ့
” အရမ်းချစ်တယ် ချစ်ရယ် “” မောင်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “”မောင် ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးပါနော့်”” ဟင်အင်း မောင် ”
” ချစ် ကြောက်တယ် မလိုက်လျောပါရစေနဲနော် မောင် “” ချစ်ကလည်းကွာ “” မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါကွာ ”
“ဟင်အင်း မောင့့်”” ကျွန်မ တို မိန်းမသား ဘဝ မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အပျိုစင် ဘဝ လေးကိုတော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ “” မပေးဆပ်ပါရစေနဲ မောင် ”
” တစ်သက်လုံး တန်ဖိုးထားလာရတဲ့ “” အပျိုစင်ဘဝ လေးကို တော့ “” မလိုချင်ပါနဲ အုံးနော် မောင် ”
” တောက်စ် “” မင်း ငါကို ချစ်တယ် ဆိုတာ ဒါလားကွာ “” ချစ်သူ တွေဖြစ်ပြီး “” မင်းငါအပေါ် ဒီလောက်တောင် မလိုက်လျောပေးနိုင်ဘူးလား”” မင်းငါအပေါ် တကယ်ချစ်တာရော“” ဟုတ်ရဲ့လား ” [ Talky တွေ ကို ကြည့်ထားနော် ချုပ် နေတာ ]
” မောင်ရယ် ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလည်း “” မောင်ကို မချစ်ပဲ နေပါမလား “” မောင်ကို အရမ်းချစ်တာပေါ့ “” စိတ်မဆိုးပါနဲ မောင်ရယ် ” မောင်စိတ်ဆိုးရင် ကျွန်မ မနေတတ်လိုပါ့””!
ကျွနိမ မောင်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုတာကို့”” မောင် ယုံကြည်အောင်ဘယ်လို သက်သေပြရမလည်းပြော”” ငါစိတ်ဆိုးတာ မမြင်စေချင်ရင် ”
” ငါတောင်းဆိုတာ လေးကို လိ်ုက်လျောပေးလေ””အများကြီးတောင်းဆိုနေတာလည်ူ မဟုတ်ဘူး “” ဒီတစ်ခါထဲပါပဲကွာ “” ဒါ ပထမဆုံးနဲ နောက်ဆုံး အကြိမ် လေးပါကွာ ”
” ချစ် မောင်အပေါ် ဘယ်လာက်ထိ ချစ်လည်းဆိုတာကို “” ချစ် အပျိုစင်ဘဝ နဲ မောင်အပေါ် သက်သေပြလေ ”
” ဟူးးးးမောင်ရယ် “”ချစ် ကလည်းကွာ “” သက်ပြင်းတွေချ မနေပါနဲ့”” ဘာဖြစ်ဖြစ် မောင်တာဝန်ယူတယ်ကွာ နော် “
”မောင် ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးလိုက်လို့”
” မောင် အလိုကို လိုက်ပေးလိုက်ရလို့”” ချစ် ဘယ်တော့မှ နောင်တမရစေရဘူးနော် “” ကတိကွာ ကတိ့”” အင်းပါ မောင်ရယ် ”
“ချစ် တစ်ခုခူဖြစ်ရင် မောင်တာဝန်ယူရမယ်နော် “” ချစ်ကို ပစ်မသွားရဘူးနော့်”” မယူရသေးခင်မှာ “” အခုလို လ်ုက်လျောပြီး ချစ်ရဲ့ အပျို စင်ဘဝကို” မောင် လက်ထဲ ထိုးအပ်လိုက်တယ် ဆိုတာကလည်း ” ” မောင်ကို ချစ်လွန်းလို “” မောင် အပေါ် ယုံကြည်လွန်းလို ပါ ”
” စိတ်ချပါကွာ “”” လုပ်ပြီး ရင် တာဝန်ယူရဲ တဲ့ စိတ်” မောင် ဆီမှာ အပြည့်ရှိပါတယ့်”[ အဲအချိန် မှာ ယောက်ျားပီသချက်ကတော့ဗန္ဓုလ နဲ အလောင်းဘုရားတောင် လက်မှိုင်ချသွားနိူင်တယ် ]
……လအနည်းငယ် ခန့်ကြာသော် ……
” မောင် ဘာလို ချစ်ဆီ ကို အရင်လို ဖုန်းမဆက်တော့တာလည်း””မအားလိုပါကွာ “” မောင်ဘာလို ချစ်က တွေရအောင်လို ပြောရင် ”
” ရှောင်ဖယ် နေရတာလည်း “” အလုပ်တွေများနေလိုပါကွာ “” ဒါဆိုဘာလို အရင်ကနဲ မတူတော့ပဲ “” မောင် အေးတိအေးဆက်ပုံစံနဲ ကျွန်မကို ဆက်ဆံနေတာလည်း “” ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ “” မောင် ပြောတော့ ကျွန်မ ကိုလက်ထပ်မယ် ဆို့”” အခု လက်ထပ်မယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ယောင်ပြီးတော့တောင် မောင်ပါးစပ်က မထွက်တော့ပါလား “” ဒီလိုအခြေအနေ မှာ ဘယ်လို လုပ်ပြီးလက်ထပ်ကျမလည်း”” မင်း တိုမိန်းမ တွေက အတူတူနေရဖိုလောက်ပဲသိတယ် “” ယူပြီးရင် နွားလို ရှာကျွေးရမှာက ငါတို ယောက်ျားတွေကွ ”[လိုချင်တာကို တောင်းနေတုန်းကဒီလေသံ ဒီအခွက်မဟုတ်ဘူး ]
” တောက်စ့်”” မင်းအခု ဘာဖြစ်ချင်နေတာလည်း “” လမ်းခွဲချင်နေတာလား ပြတ်ချင်နေတာလား “အော့်မောင်ရယ့်”” အခုကျ တော့ ဒီစကားမျိုး ပြောထွက်ပြီးပေါ့ ”
“အင်းပါ့”” မောင် အဆင်ပြေတဲ့ အချိန် လက်ထပ်ပါ့”[စိတ်ထဲကနေ ဒီမသာ ငါကိုလက်ထပ်ပါစေလိုပဲ ဆုတောင်းနေရုံက လွဲပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး ]
ကိုယ် ခန္ဓာကိုယ် ပေးမှ ကိုယ်ကို ချစ်မယ် ဆိုတဲ့ယောက်ျား မျိုး နဲ ဝေးဝေး ရှောင် ပါဆစ်တို့ရော့ Sexရော့ Love ဆိုပြီး တော့လည်းကိုယ် အပျိုစင်ဘဝ ကို ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းဘယ်သောအခါမှပြန် မသတ်မိပါစေနဲ့ကိုယ် ဟာ မိန်းမသား တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက့်ကိုယ်အပျိုစင်ဘဝကို လက်မထပ်ရ သေးပဲ့ကိုယ်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီး ခစားတဲ့ယောက်ျား ဖြစ်နေရင်တောင်မှ မထိုးကျွေးလိုက်မိပါစေနဲ့
ခန္ဓာ ကိုယ်ရမှ ချစ်မယ် ဆိုတဲ့ ယောက်ျားမျိုး နဲ တွေ့တဲ့အခါချစ်သူ ဘဝ မရောက်ခင် ရည်းစား ဘဝ မှာတင်လှည့်ပြန်လာခဲ့ကျပါ့လိုချင်တာ မရလို တကယ်မချစ်လိုလား ?
မင်းက ငါကိုမယုံကြည်လို လားဆိုတဲ့ Talky တွေ နဲချုပ် တာကို ခံရတဲ့အခါ စီးထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ စောက်ခွက် ဆယ်ချက်လောက် ဆင့်ရိုက်ပြီး လာလမ်းအတိုင်းလှည့်ပြန်လာခဲ့လိုက်စမ်းပါ့
မြဲမြဲ မှတ်ထာ့းမသေမချင်းမှတ်းထာ့းကိုယ်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားက့သူကြောင့် ဘယ်သောအခါမှကိုယ်တန်ဖိုးကို လျော့ကျအောင် မလုပ်ဘူ့း
ကိုယ်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားက့သူလက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်တန်ဖိုးကို အမြဲ မြှင့်တင်ပေးတယ့်
ဒီစာ ဟာ မိန်းမ ဘက်က လိုက်ရေးခြင်း မဟုတ်ပါ့ယောက်ျား အားလုံးကို စော်ကားရေးသားနေချင်းလည်း မဟုတ်ပါ ။ လက်ရှိ ဖြစ်နေသော ခေတ်ကို ထင်ဟပ် စေရန်သဘောတရား လောက် သာ ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်ခင်ဗျားတို အနေနဲလည်း ထင်ချင်သလို ထင်နိူင်ပါသည့်
အခုခေတ်က ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ခပ်များများဘဲ။
ကြိုက်ရင် Share ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်
Credit to : ပဲခူးသား
ခု​ခတျေ​မှာ မွနျ​မာမိနျးက​လေးအမြားစု ဘယျ​လိုဘဝပကျြ​သှားသလဲဆိုတာ သိ​စခေငျြ​လို့ ဒီ post ကို တငျ​ရတာပါ ။အစအဆုံးဖတျပွီးရှယျပေးလိုကျပါနှမခငျြးကိုယျခငျြးစာတယျဆိုရငျပေါ့
” အရမျးခဈြတယျ ခဈြရယျ “” မောငျကို တကယျခဈြတယျ ဆိုရငျ “”မောငျ ဆန်ဒကို လိုကျလြောပေးပါနေျာ့”” ဟငျအငျး မောငျ ”
” ခဈြ ကွောကျတယျ မလိုကျလြောပါရစနေဲနျော မောငျ “” ခဈြကလညျးကှာ “” မောငျက ခဈြကို တကယျခဈြတာပါကှာ ”
“ဟငျအငျး မောငျ့့”” ကြှနျမ တို မိနျးမသား ဘဝ မှာ အရေးကွီးဆုံးဖွဈတဲ့အပြိုစငျ ဘဝ လေးကိုတော့ လကျမထပျရသေးပဲ “” မပေးဆပျပါရစနေဲ မောငျ ”
” တဈသကျလုံး တနျဖိုးထားလာရတဲ့ “” အပြိုစငျဘဝ လေးကို တော့ “” မလိုခငျြပါနဲ အုံးနျော မောငျ ”
” တောကျဈ “” မငျး ငါကို ခဈြတယျ ဆိုတာ ဒါလားကှာ “” ခဈြသူ တှဖွေဈပွီး “” မငျးငါအပျေါ ဒီလောကျတောငျ မလိုကျလြောပေးနိုငျဘူးလား”” မငျးငါအပျေါ တကယျခဈြတာရော“” ဟုတျရဲ့လား ” [ Talky တှေ ကို ကွညျ့ထားနျော ခြုပျ နတော ]
” မောငျရယျ ဘယျလိုပွောလိုကျတာလညျး “” မောငျကို မခဈြပဲ နပေါမလား “” မောငျကို အရမျးခဈြတာပေါ့ “” စိတျမဆိုးပါနဲ မောငျရယျ ” မောငျစိတျဆိုးရငျ ကြှနျမ မနတေတျလိုပါ့””!
ကြှနိမ မောငျကို တကယျခဈြတယျ ဆိုတာကို့”” မောငျ ယုံကွညျအောငျဘယျလို သကျသပွေရမလညျးပွော”” ငါစိတျဆိုးတာ မမွငျစခေငျြရငျ ”
” ငါတောငျးဆိုတာ လေးကို လျိုကျလြောပေးလေ””အမြားကွီးတောငျးဆိုနတောလညျူ မဟုတျဘူး “” ဒီတဈခါထဲပါပဲကှာ “” ဒါ ပထမဆုံးနဲ နောကျဆုံး အကွိမျ လေးပါကှာ ”
” ခဈြ မောငျအပျေါ ဘယျလာကျထိ ခဈြလညျးဆိုတာကို “” ခဈြ အပြိုစငျဘဝ နဲ မောငျအပျေါ သကျသပွေလေ ”
” ဟူးးးးမောငျရယျ “”ခဈြ ကလညျးကှာ “” သကျပွငျးတှခြေ မနပေါနဲ့”” ဘာဖွဈဖွဈ မောငျတာဝနျယူတယျကှာ နျော “
”မောငျ ဆန်ဒကို လိုကျလြောပေးလိုကျလို့”
” မောငျ အလိုကို လိုကျပေးလိုကျရလို့”” ခဈြ ဘယျတော့မှ နောငျတမရစရေဘူးနျော “” ကတိကှာ ကတိ့”” အငျးပါ မောငျရယျ ”
“ခဈြ တဈခုခူဖွဈရငျ မောငျတာဝနျယူရမယျနျော “” ခဈြကို ပဈမသှားရဘူးနေျာ့”” မယူရသေးခငျမှာ “” အခုလို လျုကျလြောပွီး ခဈြရဲ့ အပြို စငျဘဝကို” မောငျ လကျထဲ ထိုးအပျလိုကျတယျ ဆိုတာကလညျး ” ” မောငျကို ခဈြလှနျးလို “” မောငျ အပျေါ ယုံကွညျလှနျးလို ပါ ”
” စိတျခပြါကှာ “”” လုပျပွီး ရငျ တာဝနျယူရဲ တဲ့ စိတျ” မောငျ ဆီမှာ အပွညျ့ရှိပါတယျ့”[ အဲအခြိနျ မှာ ယောကျြားပီသခကျြကတော့ဗန်ဓုလ နဲ အလောငျးဘုရားတောငျ လကျမှိုငျခသြှားနိူငျတယျ ]
……လအနညျးငယျ ခနျ့ကွာသျော ……
” မောငျ ဘာလို ခဈြဆီ ကို အရငျလို ဖုနျးမဆကျတော့တာလညျး””မအားလိုပါကှာ “” မောငျဘာလို ခဈြက တှရေအောငျလို ပွောရငျ ”
” ရှောငျဖယျ နရေတာလညျး “” အလုပျတှမြေားနလေိုပါကှာ “” ဒါဆိုဘာလို အရငျကနဲ မတူတော့ပဲ “” မောငျ အေးတိအေးဆကျပုံစံနဲ ကြှနျမကို ဆကျဆံနတောလညျး “” ဘာမှမဖွဈပါဘူးကှာ “” မောငျ ပွောတော့ ကြှနျမ ကိုလကျထပျမယျ ဆို့”” အခု လကျထပျမယျ ဆိုတဲ့ စကားကို ယောငျပွီးတော့တောငျ မောငျပါးစပျက မထှကျတော့ပါလား “” ဒီလိုအခွအေနေ မှာ ဘယျလို လုပျပွီးလကျထပျကမြလညျး”” မငျး တိုမိနျးမ တှကေ အတူတူနရေဖိုလောကျပဲသိတယျ “” ယူပွီးရငျ နှားလို ရှာကြှေးရမှာက ငါတို ယောကျြားတှကှေ ”[လိုခငျြတာကို တောငျးနတေုနျးကဒီလသေံ ဒီအခှကျမဟုတျဘူး ]
” တောကျဈ့”” မငျးအခု ဘာဖွဈခငျြနတောလညျး “” လမျးခှဲခငျြနတောလား ပွတျခငျြနတောလား “အေျာ့မောငျရယျ့”” အခုကြ တော့ ဒီစကားမြိုး ပွောထှကျပွီးပေါ့ ”
“အငျးပါ့”” မောငျ အဆငျပွတေဲ့ အခြိနျ လကျထပျပါ့”[စိတျထဲကနေ ဒီမသာ ငါကိုလကျထပျပါစလေိုပဲ ဆုတောငျးနရေုံက လှဲပွီး ကနျြတာ ဘာမှ မတတျနိုငျဘူး ]
ကိုယျ ခန်ဓာကိုယျ ပေးမှ ကိုယျကို ခဈြမယျ ဆိုတဲ့ယောကျြား မြိုး နဲ ဝေးဝေး ရှောငျ ပါဆဈတို့ရော့ Sexရော့ Love ဆိုပွီး တော့လညျးကိုယျ အပြိုစငျဘဝ ကို ကိုယျကိုတိုငျလညျးဘယျသောအခါမှပွနျ မသတျမိပါစနေဲ့ကိုယျ ဟာ မိနျးမသား တဈယောကျ ဖွဈတဲ့အတှကျ့ကိုယျအပြိုစငျဘဝကို လကျမထပျရ သေးပဲ့ကိုယျရှမှေ့ာ ဒူးထောကျပွီး ခစားတဲ့ယောကျြား ဖွဈနရေငျတောငျမှ မထိုးကြှေးလိုကျမိပါစနေဲ့
ခန်ဓာ ကိုယျရမှ ခဈြမယျ ဆိုတဲ့ ယောကျြားမြိုး နဲ တှတေဲ့အခါခဈြသူ ဘဝ မရောကျခငျ ရညျးစား ဘဝ မှာတငျလှညျ့ပွနျလာခဲ့ကပြါ့လိုခငျြတာ မရလို တကယျမခဈြလိုလား ?
မငျးက ငါကိုမယုံကွညျလို လားဆိုတဲ့ Talky တှေ နဲခြုပျ တာကို ခံရတဲ့အခါ စီးထားတဲ့ ဖိနပျနဲ စောကျခှကျ ဆယျခကျြလောကျ ဆငျ့ရိုကျပွီး လာလမျးအတိုငျးလှညျ့ပွနျလာခဲ့လိုကျစမျးပါ့
မွဲမွဲ မှတျထာ့းမသမေခငျြးမှတျးထာ့းကိုယျကို တကယျခဈြတဲ့ ယောကျြားက့သူကွောငျ့ ဘယျသောအခါမှကိုယျတနျဖိုးကို လြော့ကအြောငျ မလုပျဘူ့း
ကိုယျကို တကယျခဈြတဲ့ ယောကျြားက့သူလကျထဲမှာ ရှိတဲ့ ကိုယျတနျဖိုးကို အမွဲ မွှငျ့တငျပေးတယျ့
ဒီစာ ဟာ မိနျးမ ဘကျက လိုကျရေးခွငျး မဟုတျပါ့ယောကျြား အားလုံးကို စျောကားရေးသားနခေငျြးလညျး မဟုတျပါ ။ လကျရှိ ဖွဈနသေော ခတျေကို ထငျဟပျ စရေနျသဘောတရား လောကျ သာ ရေးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ့ခငျဗြားတို အနနေဲလညျး ထငျခငျြသလို ထငျနိူငျပါသညျ့
အခုခတျေက ဒီလိုဖွဈနတေဲ့သူတှေ ခပျမြားမြားဘဲ။
ကွိုကျရငျ Share ပေးဖို့မမနေဲ့နျော